Aboutamonth ago th - Engelska - Burmesiska Översättning och exempel
You searched for: aboutamonth ago there was an accident (Engelska - Burmesiska)
အကူအညီကို ပြသရန် အမှားအယွင်းဖြစ်နေသည်
there was an error starting the call
အကူညီ ဖော်ပြခြင်း အမှား ဖြစ်နေပါသည်။
there was an error starting the conversation
“%s” အား ဖျက်ဆီးရာတွင် မှားယွင်းမှုဖြစ်နေသည်
there was an error while trying to connect to the telepathy account manager. the error was: %s
မြို့ထဲမှာ ကြီးစွာသော မီးခိုးတက်စေရမည်အကြောင်း ဣသရေလလူတို့သည် ကင်းစောင့်လူတို့အား အကြံပေးနှင့်ကြပြီဖြစ်၍၊
မင်းအရာရှိတို့နှင့်ယုဒအမျိုးသား၊ တပါးအမျိုးသားတို့သည် တမန်တော်တို့ကို ညှဉ်းဆဲ၍ ကျောက်ခဲနှင့် ပစ်မည်ဟုတဟုန်တည်း ပြေး လာကြသည်အကြောင်းကို၊
တမန်တို့သည်ဝင်ကြသောအခါ ဆိတ်မွေးနှင့် ရက်သော ကုလားကာနှင့် ခေါင်းရင်းရှေ့၌ ကာလျက်၊ ခုတင်မှာ တေရပ်ရုပ်တု ရှိပါသည်တကား။
ဝတ်လုံ၌ လည်စွပ်ပါ၍ လည်စွပ်ကို မစုတ်စေခြင်းငှာ၊ သံချပ်လည်စွပ် ကွပ်သကဲ့သို့ ကွပ်လေ၏။
အသက် တလလွန်၍ စာရင်းဝင်သော လေဝိ သား ယောက်ျားပေါင်းကား၊ နှစ်သောင်းသုံးထောင် ရှိသတည်း။ သူတို့သည် ဣသရေလ အမျိုးသားတို့နှင့်အတူ အမွေမခံရသောကြောင့်၊ ရောနှော၍ စာရင်းမဝင်ရကြ။
there was an error parsing your '%s' file. default values will be used.abackup of your configuration has been created at '%s'.
သင့်ရဲ့ ဖိုင် '%s' ကို ဖေါ်ပြမှု မှားယွင်းချက် တခု ရှိတယ်။ စံထားချက် တန်ဖိုးများကို သုံးစွဲလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ ပြုပြင်ဖန်တီးခြင်း အရံသင့်သိမ်းဆည်းမှု တခုကို '%s' မှာ ဖန်တီးထားတယ်။
ထရံအခန်းအောက်ဆင့်မှသည် ဒုတိယအဆင့် သို့၎င်း၊ ဒုတိယအဆင့်မှသည် တတိယအဆင့်သို့၎င်း တက်သည်အတိုင်း၊ အိမ်တော်ထရံပတ်လည် တရှောက် လုံးဆက်ကာ ဆက်ကာဆုတ်၍၊ အခန်းနေရာသည် အစဉ် အတိုင်းကျယ်လျက် အဆင့်ဆင့်တက်၏။
science and religionthis article appears in einstein's ideas and opinions, pp.41--49. the first section is taken from an address at princeton theological seminary, may 19, 1939. it was published in out of my later years, new york: philosophical library, 1950. the second section is from science, philosophy and religion,asymposium, published by the conference on science, philosophy and religion in their relation to the democratic way of life, inc., new york, 1941.1.during the last century, and part of the one before, it was widely held that there was an unreconcilable conflict between knowledge and belief. the opinion prevailed among advanced minds that it was time that belief should be replaced increasingly by knowledge; belief that did not itself rest on knowledge was superstition, and as such had to be opposed. according to this conception, the sole function of education was to open the way to thinking and knowing, and the school, as the outstanding organ for the people's education, must serve that end exclusively.
alabastrum (Latin>Lettiska)phim set loan luan (Engelska>Vietnamesiska)missä minun paikka on (Finska>Engelska)see you tomorrow my love (Engelska>Spanska)mee to what's you do (Engelska>Hindi)its forex trading are you interested (Engelska>Hindi)miscellaneous (Afrikaans>Engelska)protruding from her spinal cord tagalog (Engelska>Tagalog)do you want to chat (Engelska>Indonesiska)jaisa bhi hai thik hai (Hindi>Thai)tulkotājs (Lettiska>Slovenska)ricomincerà (Italienska>Engelska)serial number (Engelska>Hindi)valobashar kobita (Engelska>Bengaliska)estoy esperando la respuesta (Spanska>Danska)nits (Danska>Arabiska)togliendo (Italienska>Spanska)anata ga yatte (Japanska>Engelska)madam alis na po ako (Tagalog>Engelska)yes i have you (Engelska>Hindi)advantages of hostel life (Engelska>Hindi)permanence (Engelska>Swahili)nimekuwa (Swahili>Cebuano)mather's maiden name (Engelska>Malajiska)het uitvoeren van een taak (Holländska>Danska)